トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ (Style Earl) khadi R-style [esijikelezayo ngetyala-kuphela]
inqununu balance isilayidi kwaye iflethi-wenzala ajikelezayo ngetyala. 10,000 yen nelona qondo liphezulu imali yenyanga intlawulo, 20,000 yen, wammisa phakathi 30,000 yen, uya uyiweze kwinyanga ezayo ukuba ikhadi inkcitho ingaphezulu kwe isixa esilinganiselweyo semali. Ukuba usebenzisa 100,000 yen isetelwe ku 10,000 yen ikhosi intlawulo yenyanga, inzala iya kuba 1250 yen iphinda phindiweyo ngo-1.25%, ukuya 8750 yen thabatha 1250 yen evela yen 10,000 buyiselo oyinhloko kuya kunikezelwa.
60 yen ukusuka 400,000 yen
R-style (Earl style) card ikhadi ribonucleic ezinikeleyo ekhutshwe uJack giant lokuthenga. Intlawulo yobulungu likhululekile yonke indlela ukususela kunyaka wokuqala. Kuthatha umdla ribonucleic ukususela kwixesha lokuqala. Xa tsalela iziko lethu lemibuzo ukuba lugqithe ngaphaya umda ngetyala
, ungakwazi wekhadi. Icaciswe iqhuma-mali yentlawulo okanye yebhonasi intlawulo olujikelezayo ngetyala nezinye iindlela intlawulo enye, ezifana, kodwa ukunikela, kuya kuba ngokuzenzekelayo yokuba olujikelezayo unyango ngetyala.
iye yamkela ingongoma Lovely lilungelo
IKONA point system, xa kuthelekiswa namanye IKONA kunikezelo ikhadi kuya kufuneka iingongoma ezimbini. Kuyenzeka ukusindisa bonke ngamanqaku-2 200 yen, umlinganiselo ukwehla isoloko-1%. Le ngongoma zibe nokutshintshanisa ANA iikhilomitha okanye Jal Mileage Bank, DoCoMo indawo, i T ingongoma, yinto elungileyo kulula-to-ukusebenzisa ikhadi.
Nangona kunjalo, ukukhetha intlawulo epheleleyo ngexesha wokuqala ukuze uphephe umdla olujikelezayo ngetyala, uluntu ukuba basebenzise umxholo lowo olujikelezayo umdla credit 1. 25% iye yaba Terms odlayo uqinisekise-. Kukho inkonzo supplementary elibizwa uxolo net kweenkonzo njengoko amanyathelo yobuqhophololo kwi-intanethi, ngokuqhelekileyo inkampani ngetyala akukho kum imbuyekezo, imbuyekezo xa kwimeko ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni inombolo yekhadi kwi Internet ziye engalindelekanga.
imali yonyaka njengoko iinzuzo ezinkulu kukuba i-inshorensi yokuhamba phesheya for free uhamba ngokuzenzekelayo. Ngoko ke, kubalulekile ukuba ikhadi ukusebenzisa njenge-inshorensi yokuhamba phesheya. Ngenxa yokuba automatic ezingalindelekanga, isiphumo iyafana naleyo iqulethwe kule inshorensi ebibanjelwe ShichiEru kuphela.
ezifana-inshorensi, ezifana njengezipho ukuhamba inkampani, into enye ukuze ibe yimbuyiselo umonakalo ingozi kunye nonyango yokugula iindleko kunye nempahla ukuba dibanisa, oko wajoyina i-inshorensi efunekayo yi zehambo aphesheya kuphela kuya kubakho.
Abahambi ziyacetyiswa isiqinisekiso isicelo
ibimele ukuba ziyakwazi qha abantu yobudala ifowuni uneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu, ubhalise njengomfundi. Ukuqwalasela kwakhona ndawonye interchangeable kunye kwinqanaba le-ANA kunye Jal, nina nithi ukuba ikhadi oko kumlungele na abantu abaya rhoqo ukuba zindwendwele phesheya.
ekhaya nakumazwe aphesheya, kuba izinto ezithengwe kwi ikhadi R-isimbo, nayo inkonzo ebizwa ukhuseleko evenkileni ukuze kubuyekezelwe umonakalo, ezifana umonakalo okanye ubusela okubangelwa ngengozi ngengozi eziyi 90 ukususela ngomhla ekuthengwe ngawo ukuya yen million 1 ngonyaka ngamnye ukuba uhamba.
ungakwazi ukufaka ikhadi njl, ukuhamba abantu ozithandayo kunye, Kuyinto efanelekileyo ukuba abantu abanjalo ukuba isebenze. ukhuselo shopping nkqu ukubuyekeza ziye kakhulu zivavanywe, isidima kwaye kukho ingqiqo ukhuseleko ukuya evenkileni. System ebizwa J yokugcina mobile ukuba zingalujongi kokuhanjiswa of mobile phones nazo ithandwa ngu ngeranti eliphezulu. Ngokufanayo inshorensi, kunye nembuyekezo kuba Plus umonakalo yokwenzakala, iindleko zonyango ukugula kunye nempahla, isiphumo kuyafana inshorensi efunekayo yi yokuhamba aphesheya nje ukuba.
ungakwazi ukufaka ikhadi njl, ukuhamba abantu ozithandayo kunye, Kuyinto efanelekileyo ukuba abantu abanjalo ukuba isebenze. ukhuselo shopping nkqu ukubuyekeza ziye kakhulu zivavanywe, isidima kwaye kukho ingqiqo ukhuseleko ukuya evenkileni. System ebizwa J yokugcina mobile ukuba zingalujongi kokuhanjiswa of mobile phones nazo ithandwa ngu ngeranti eliphezulu. Umgca abantu ozithandayo kunye, thina efanelekileyo ukuba abantu abanjalo ukuba isebenze. ukhuselo shopping nkqu ukubuyekeza ziye kakhulu zivavanywe, isidima kwaye kukho ingqiqo ukhuseleko ukuya evenkileni. System ebizwa J yokugcina mobile ukuba zingalujongi kokuhanjiswa of mobile phones nazo ithandwa ngu ngeranti eliphezulu. Umgca abantu ozithandayo kunye, thina efanelekileyo ukuba abantu abanjalo ukuba isebenze. ukhuselo shopping nkqu ukubuyekeza ziye kakhulu zivavanywe, isidima kwaye kukho ingqiqo ukhuseleko ukuya evenkileni. System ebizwa J yokugcina mobile ukuba zingalujongi kokuhanjiswa of mobile phones nazo ithandwa ngu ngeranti eliphezulu.